Hoggaamiyaha Xizbullah oo markii ugu horreysay shaaciyey tirada ciidamada Xizbullah | Dayniile.com
Home Warkii Hoggaamiyaha Xizbullah oo markii ugu horreysay shaaciyey tirada ciidamada Xizbullah
Hoggaamiyaha Xizbullah ayaa sheegay in dhaq-dhaqiisa uu haysto 100,000 oo dagaal-yahan “oo tababaran islamarkaana hubeysan,” isaga oo hadlayey kadib rabshadihii dhimashada lahaa ee toddobaadkii tegay ka dhacay magaalada Beirut.
Hassan Nasrallah oo jeediyey khudbad laga sii daayey taleefishinka ayaa ku eedeeyey xisbiga Kirishtanka Lubnaan ee LF inay ka dambeeyeen dilka toddoba xubnood oo ka tirsan kooxdiisa iyo kooxda ay Shiicada ah ee ay xulufada yihiin ee Amal, kuwaas oo lagu dilay dibadbax dhacay Khamiistii.
“Waxaa markii ugu horeysay qasab igu ah inaan ku dhowaaqo tiradan,” ayuu yiri Hassan Nasrallah oo sharxaya shaac ka qaadista tirada dagaal-yahanadiisa, taasi oo uu sheegay inuu uga dan leeyahay “inuu ka hortago dagaal, ee aanu ku hanjabeyn dagaal sokeeye.”
Nasrallah ayaa hadlayey ayada oo ay sare u kacday xiisadda ka taagan Lubnaan ee ka dhalatay garsoore loo magacaabay inuu baaro qaraxii sanadkii tegay ka dhacay dekeedda Lubnaan, kaasi oo ay ku dhinteen 210 qof, islamarkaana dhaawacay kumanaan kale.
Rabshadaha ayaa Khamiistii ka qarxay Beirut kadib markii taageerayaasha Xizbullah iyo Amal ay dhigeen dibadbax ay ku dalbanayaan inuu is-casilo garsoore Tarek Bitar.
Xizbullah iyo Amal ayaa ku eedeeyey dadka wax toogta ee xisbiga Kirishtanka ee LF inay billaabeen dagaalka.
Hase yeeshee hoggaamiyaha LF, Samir Geagea ayaa beeniyey, wuxuuna sheegay in dadka degan xaafadda Kirishtanka ee Ain al-Remmaneh “ay iska difaaceen maleeshiyo ka tirsan Xizbullahi oo isku dayey inay galaan guryahooda.”
Nasrallah ayaa ku baaqay baaritaan go’aan looga gaaro cidda mas’uul ka ah dhiigga daatay isaga oo yiri “Sababtoo ah ma aqbali karno in dhiigga walaalaheen uu dhulka ku daato, innaga oo aan waxba sameyn.”
Previous articleMuhammadu Buhari oo ku dhawaaqay howlgal lagu soo Afjarayo burcadda ka howlgasha dalkaas
Next articleQoowmiyada Reer Nigeria ah isu haysta in ay Yuhuud yihiin
Bal qiyaas jawiga waalidka uu saaka ku jiri karo.
Bal qiyaas jawiga waalidka uu saaka ku jiri karo. Waxay toostay 4.00 AM; si ay camal adduun iyo mid aakhiraba u hormarsato, salaaddii subax buu...
Madaxweynaha HirShabelle oo soo gaaray magaalada Muqdisho
Taliyihii Hore ee NISA: Tuuryare oo shaaciyey xog xasaasi ah oo...
Xiisad colaadeed oo ka taagan Guriceel